Mafomu ekuwedzera watermark kumafoto pane yedu iPhone | IPhone nhau
Mafomu ekuwedzera watermark kumafoto pane yedu iPhone
Kana tichida kutora mafoto, zvingangoita kuti kana zvasvika pakugovana zvatakatora zvinotorwa, isu tichafunga kaviri, nekuti iwe hauzive kwavangaperera, kunyanya kana mhedzisiro yacho yakanaka. Muzviitiko izvi, tinogona kusarudza kuenda kumba uye kuburikidza nekugadzirisa kunyorera, senge Photoshop, Pixelmator kana GIMP wedzera watermark yedu kuti gare gare ugovane navo nerunyararo rwepfungwa. Kana isu tinogona kushandisa mashandisirwo ayo atinowana kwatiri muApp Store uye anotibvumidza isu kuwedzera watermark tisingafanirwe kuzviita kuburikidza nekombuta yedu, kuti tikwanise kuigovana ipapo ipapo.
Pane ese mafomu anowanikwa muApp Store, Ini ndangosarudza matatu chete, kuitira kuti maitiro ekusarudza ekunyorera haana kuomarara. Ese anoshanda chaizvo pabasa iri, asizve chimwe chazvo, tinogona kuwana zvakawanda kubva mairi pane kungoisa mavhoti kumifananidzo.
Kufamba kwebasa ndiko kushanda kwe automated workflows iyo isingotitenderi isu kuti tiwedzere watermark kuburikidza nekuyerera Nyore Watermark y Ovelay Watermark. Kutenda nekufashukira uku tinokwanisa kuteedzera iwo mavara atinoda kuisa sewa watermark kubhodhibhodhi uye tishandise kuiwedzera kumifananidzo yakawanda pamwechete. Asi zvakare, Kufamba kwebasa kunotipa huwandu hukuru hwe otomatiki kwatinogona kutora mukana wakakura.
Kutenda kuWatermark tinokwanisa kuchengetedza mifananidzo yedu nerunyoro, graphic, siginecha kana kodhi yeQR kuitira kuti zvizivikanwe nguva dzese kuti isu tiri varidzi vayo. Iyo inotipa isu kusvika gumi nemashanu mafonti akasiyana kuti tigadzire watermark yedu kuwedzera kune makumi matatu nemana zvinhu nazvo kugadzira mufananidzo wakasarudzika kana graphic kusaina edu ese mafoto. Iyo ine yemahara vhezheni ine mashoma masarudzo, ayo zvakare anosanganisira ayo ayo watermark, asi kuti uone mashandisiro acho mashandiro ayo anoshanda zvakakwana.
iWatermark Lite Watermark Picsvakasununguka
Ichi chishandiso chine yakabhadharwa vhezheni uye yemahara lite vhezheni (iyo inosanganisira yeapp watermark), nayo iyo watermark sarudzo iri mashoma kwazvo. eZy Watermark inotibvumidza kuita maitiro e batch kuwedzera ma watermark anosvika zana mapikicha pamwe chete, zvinotibvumidzawo, sekushandisa kwekutanga, kuwedzera masiginecha, zvinyorwa, gothic, kodzero dzemotokari, QR kodhi ... Kana tangowedzera watermark tinogona kuigovana kuburikidza neFacebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, e-mail …
eZy Watermark Mifananidzo6,99 €
eZy Mufananidzo Watermark Litevakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mafomu ekuwedzera watermark kumafoto pane yedu iPhone
Iyo Eclipse 4 tweak inotipa iyo yakasviba modhi muIOS 10
Déjà vu?: Kugadzirwa kwe iPhone 8 kutanga kutanga kupfuura zvakajairwa